कतारबाट स्वदेश फर्कंदै हुनुहुन्छ ? एहतेराज एप नचलाएका व्यक्तिले यात्रा गर्न नपाउने - Himali Patrika
कतारबाट स्वदेश फर्कंदै हुनुहुन्छ ? एहतेराज एप नचलाएका व्यक्तिले यात्रा गर्न नपाउने
हिमाली पत्रिका १७ असार २०७७, 1:41 pm
दुई सय ९९ नेपाली स्वदेश फर्किए
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण कतारमा समस्यामा परेका दुई सय ९९ जना नेपाली आज नेपाल फर्किएका छन् ।
हिमालयन एयरलाइन्स उडान नम्बर एच ९५६३२ मार्फत दोहास्थित हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय ५४ जना स्वदेश फर्किएका हुन् । सो उडानमा ६ जना महिला र १४८ जना पुरुष सवार थिए ।
त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सको आरए २३९२ उडान मार्फत १४५ जना नेपाल फर्किएका छन् । सो उडान बाट २ जना महिला,१४३ पुरुष र एक जनाको शव पनि लगिएको छ ।
आज फर्कनेहरुमा धेरै संख्यामा दूतावासको प्राथमिकतामा परेका दीर्घ रोगी,लगायत जागिर गुमेका पीडितहरु छन् । उनीहरु रोजगारदाताले दिएको टिकट र कोही आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्केका हुन्। कतार बाट भएको यो सातौं उडान हो । दूतावासको अनुसार अर्को उडान भोलि २ तारिकलाई तय गरिएको छ ।